တရုတ်ခေါက်သိမ်းနိုင်သောအရွယ်အစားကြီးသောနေ့လယ်စာအအေးအိတ်အိတ်စားပွဲအတွက်ပျော်ပွဲစားအစားအစာဖြန့်ဝေသည့်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | ZKLS
ခေါက်သိမ်းနိုင်သော insulator တွင်လည်းကြီးမားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောနေ့လည်စာအေးအေးအိတ်တောင်းစားပွဲထိုးစားပွဲထိုး
We areaprofessional bag supplier in china and more than 10 years since we sell first products for custom, our products line extent to cotton canvas bag, insulated အအေး, paper bag, non-woven bag, drawstring bag and etc.
ပစ္စည်းအမည် Foldable insulated large capacity lunch အအေး basket picnic food delivery
အားသာချက် သုံးစွဲသူ၏လိုဂိုကို ၁၀ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံထုတ်လုပ်သူရရှိနိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုမှု ထုပ်ပိုးခြင်း၊ မြှင့်တင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းထုတ်ကုန်များ၊ ဝိုင်၊ အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ။
အသွင်အပြင် အရည်အသွေးမြင့်သော၊ ခေါက်ထားခြင်း၊ အရောင်ကြည်လင်သော၊ ခိုင်မာသော၊ ၀ တ်ဆင်နိုင်မှု၊ အပူကာကွယ်မှု၊ လွယ်ကူသောသန့်ရှင်းရေး၊
ပစ္စည်း Outer:oxford fabric, Non-woven , woven, pp woven, cotton, canvas, polyster, nylon or other customized material .
အတွင်းပိုင်း - ၁.၅ - ၅ မီလီမီတာ EPE လူမီနီယံရုပ်ရှင်
အရွယ်အစား 21cm (W) 15cm(H)15cm(D) , 20cm(W)30cm(H)17cm(D),
25cm (W) 30 (H) 19 (D), 30cm (W) 30cm (H) 20cm ()) သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
ကိုင်တွယ် ရက်ကန်းမဟုတ်သောထည်၊ နိုင်လွန်၊ Webbing / self-ပစ္စည်း / ဝါဂွမ်းကျစ်ခြင်း
ပုံနှိပ်ခြင်း ဖန်သားပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ အော့ဖ်စက်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ အပူလွှဲပြောင်းခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
လက်မှုပညာ အပ်ချုပ်, အပူတံဆိပျ။
ပူးတွဲဖိုင်များ ဇစ်, တံဆိပ်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်တောင်းဆိုချက်ကို
ထုပ်ပိုး 20pcs / opp အိတ်အတွင်း,
20pcs / ပုံးပုံး, တင်ပို့မှုသို့မဟုတ်အခြားလိုအပ်ချက်များကို။
OEM & ODM ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံသည်
လိုဂို ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပန်းထိုးခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ရရှိနိုင်သောလက်မှတ် SGS: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန် SGS ကိုရှောက်သွားနိုင်!
နမူနာကြေး အခမဲ့: စတော့ရှယ်ယာကျနော်တို့ပေးဖို့ဆန္ဒရှိ;
နမူနာအလွတ်၊ ပမာဏသည် ၅၀၀၀pcs နှင့်ညီသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀ မှ ၈၀၊
ခဲ - အချိန်နမူနာ 3-5 ရက်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လေ၊ လေ၊ အမြန်ဖြင့်လည်းကောင်း၊
စျေးနှုန်း အိတ်၏ပစ္စည်း၊ အရွယ်အစား၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ အနုပညာလက်ရာများအစရှိသည်တို့အရသိရသည်။
ကြိုတင်၍ T / T ဖြင့် ၃၀% အပ်ငွေ၊ တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ T / T မှ ၇၀% ချိန်ခွင်
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး A: Air-We မှကုန်ပစ္စည်းများကို UPS, DHL သို့မဟုတ် Fedex မှတစ်ဆင့် Bieb မှ
B: ပင်လယ် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သူသည်သဘောင်္တင်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်း၊ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းခြင်း၊
အနက်ရောင် polyester အေးအိတ်
အပြာ Polyester အေးအိတ်
အစိမ်း Polyester အေးအိတ်
ပန်းရောင် Polyester အေးအိတ်
ငွေအ polyester အေးအိတ်
wateraproof polyester အေးလွယ်အိတ်
၂၀၂၀ လက်ကားအရောင်းအ ၀ ယ်စျေးပေါသောရက်များမဟုတ်သောကျောင်းများ ...
၁၀၀% ဂေဟစနစ်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်သန့်ရှင်းသော ...
အအေးခံအစားအစာဖြန့်ဝေ Cooler Bag အိတ် ...
စိတ်ကြိုက်လိုဂို Oem insulator တွင်လည်းအိတ်များပေးပို့သည့်အိတ် ...
ပန်းရောင် PU စျေးဝယ်အိတ် ၊ နေ့စဉ်အိတ်၊ မီးခိုးရောင် PU စျေးဝယ်အိတ် ၊ PU အိတ်စျေးဝယ် ၊ အဖြူရောင် PU စျေးဝယ်အိတ် ၊ စျေးဝယ်အိတ်၊